Warbixin:- Madaxweyne Dani Oo Ka hadlwy Sababta uu oga qeyb galiwayay Shirka Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Warbixin:- Madaxweyne Dani Oo Ka hadlwy Sababta uu oga qeyb galiwayay Shirka Muqdisho
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni oo xalay ka qeyb galay kulan loogu magac daray Kulanka Madaxweynaha iyo dadweynaha Gobolka Bari oo si toos ah Telefishinada looga daawanayay ayaa ka hadlay sababaha ay u diideen inay ka qeyb galaan Shirka Madasha Iskaashiga Soomaaliya ee shalay ka furmay Muqdisho.
Saciid Deni ayaa sheegay in shirkaas aan laga tala gelin Puntland, isla markaana ay ka arkeen ayna baraha bulshada wax kasta oo diyaarsan, xitaa war murtiyeedkii shirka laga soo saari lahaa.
“Waxaan rabaa inaan dadweynaha la wadaago sababaha Puntland uga qeyb gelin shirkaas, waxaan aad uga xunnahay in shirka noocaas ah in Puntland aan laga tala gelin, inaan ka aragnay baraha bulshada iyo war murtiyeedkii shirka oo ahaa mid diyaarsan, markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan talo ku laheyn waxaa inoo soo baxday in aan ra’yi ku laheyn oo aan Puntland baahideeda la weydiineyn, runtii wax Puntland qaadan karto ma ahan”ayuu yiri Saciid Deni.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in wada hadalo la galaan dowladda Federaalka, isla markaan auu noqdo mid toos ah oo Telefishinada laga daawado, lana doodo, si ay shacabka Soomaaliyeed u ogaadaan waxa la isku haayo.
“Waxaan fahmayaa in dadka aan wax ka ogeyn waxa jira ay aqbalaan wixii loo sheego,waxaan diyaar u nahay inaan dowladda federaalka la furno wada-hadallo Toos loo daawado si Bulshada u ogaato wixii aan isku heyno loona xaliyo”ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Shirka Madasha Iskaashiga Somalia ee shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxaa qaadacay oo aan ka qeyb gelin Maamulada Puntland iyo Jubbaland, iyadoo shirka la filayo in maanta la soo gabagabeeyo